भाइटीकाको शुभ साइत सार्वजनिक – Khabar Silo
काठमाडौँ । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले यस वर्षको भाइटीकाको शुभ साइत सार्वजनिक गरेको छ।
समितिले तिहारका विभिन्न पर्वको निर्णय गर्दै भाइटीकाको साइत सार्वजनिक गरेको अध्यक्ष प्रा. डा. रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिए। कात्तिक १२ गते मङ्गलबार बिहान ११ः५५ बजे भाइटीकाको साइत उत्तम रहेको उनले बताए।
गाई, गोरु र आत्म (म्ह) पूजा भने कात्तिक ११ गते सोमबार गर्नुपर्ने शास्त्रीय वचन रहेको छ । ११ गते बिहान ९ः४३ बजेसम्म औंशी तिथि पर्दछ । त्यसपछि कात्तिक शुक्ल प्रतिपदा प्रारम्भ हुने भएकाले आत्म (म्ह) पूजा यसै दिन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कात्तिक १२ गते भाइटीकाकै दिन यस वर्ष नेपाल सम्वत्अनुसार नयाँ वर्ष मनाउनुपर्ने पनि समितिले जनाएको छ । प्रतिपदाका दिन सूर्योदय भएकै दिन नयाँ वर्ष मनाउनुपर्ने शास्त्रीय वचनअनुसार यस्तो निर्णय गरिएको अध्यक्ष गौतमले बताए । यसै दिनदेखि नेपाल संवत् ११४० सुरु हुन्छ ।
महराको बचाउमा रोशनी नै अदालतमा
काठमाडौं। नि’र्वतमान कृ’ष्णबहादुर म’हरा प्र’करणमा रो’शनी शा’ही पु’नः अदालतसम्म पु’गेकी छन्। आइतबार अदालतमा म्या’द थ’पका ला’गि महरा पु’ग्दा उनीपछि नि’वेदन लि’एर पु’गेकी हुन्। रो’शनीले अदालतमा आ’फूलाई प्रहरीले ज’बरजस्ती ग’री द’बाब दि’एर जा’हेरी दिन ल’गाएको दा’बी ग’रेकी छन्। महरा र आ’फ्नो पा’रिवारिक स’म्बन्ध भ’एको र आफूमा’थि ब’ला’त्कार न’गरेको जि’कीर उनले गरेकी छन्। उनले प्रहरीले प’टकपटक आ’फूलाई […]
सरकार, र्‍यापमा माधव घिमिरेको जस्तो अलंकार हुँदैन!
काठमाडौं– चर्चित र्‍यापर समिर तामाङ ‘भिटेन’लाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध र बहस सुरु भएको छ।अभद्र, अश्लीलता र छाडापन बोलेको भन्‍दै महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको टोलीले बिहीबार पक्राउ गरेपछि सामाजिक सञ्‍जाल ट्विटरमा विरोध र बहस गर्दै आम नागरिकले सरकार र प्रहरी प्रशासनको चर्को आलोचना गरिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा दोस्रो दर्जाकी ह्‍याण्डलबाट परिचित […]
जलवायु परिवर्तनको संकट रोक्न विश्व समुदायसँग वनमन्त्रीको अपिल
वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित संकट समाधानमा गम्भीर बन्न विश्व नेताहरुलाई अपिल गरेका छन् । पृथ्वी र मानव अस्तित्वलाई संकटमा पार्ने जोखिमतर्फ उनले विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराए । संयुक्त राष्ट्र संघको आयोजनामा अमेरिकाको न्यूयोर्कमा जारी जलवायु कार्य शिखर सम्मेलनको ‘अ कल फर एक्सन रेजिङ एम्बिसन फर क्लाइमेट एडप्टेशन एण्ड रेजिलियन्स’ र […]